ရန်သူကို အဆွေခင်ပွန်းဟု ထင်စားခြင်းတို့ပေတည်း။
အထက်တွင် ဖော်ပြလိုက်သော 'အာရပ်' စကားပုံလေးကို ကျွန်တော်မကြခဏ သတိရမိတတ်သည်။ မိတ်ဆွေများကိုလည်း မကြခဏရွတ်ပြမိဖူးသည်။ အထူးသဖြင့် - 'အကြောင်းမဟုတ်ဘဲ အမျက်ထွက် ခြင်း' ဟူသောအချက်တို့သည် ကျွန်တော့်ကို အတန်းအသင့် ပိုမိုလိမ္မာလာစေသည်ဟု ထင်မိသည်။ အကြောင်းမဟုတ်ဘဲ အမျက်ထွက်ခြင်းဟူသော စကားကိုကျွန်တော်မကြာခဏ စဉ်းစားကြည့်မိဖူး သည်။ အမျက်ထွက်သည် ဆိုကတည်းက အမျက်ထွက်စရာအကြောင်းတော့ ရှိရပေမည်ပေါ့။
ယခု ဤစကားပုံတွင် ဆိုလိုသည်က မဖြစ်စလောက် အသေးအဖွဲများကြောင့် အမျက်ထွက်ခြင်းကို ဆိုလို သည်ဟု ကျွန်တော်ကောက်ယူမိပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်တွင် မဖြစ်စလောက် အသေးအဖွဲ ကလေးအတွက် အမျက်ထွက်တတ်ကြသူများကို တွေ့ရဖူးကြပါသည်။ ထိုသို့သော သူများသာမဟုတ် ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုငပင်လျှင်လည်း တစ်ခါတစ်ရံတွင် ထိုကဲ့သို့ မဖြစ်စလောက် အသေးအဖွဲကိစ္စ လေးများအတွက် အမျက်ထွက်ခဲ့မိသောကြောင့် ပြန်လည်စဉ်းစားမိတိုင်း ရှက်ရသော (မိမိကိုယ်မိမိ ရှုတ်ချမိသော) အဖြစ်ကလေးများကို ကြုံခဲ့ကြရဖူးပါသည်။
'အကြောင်းမဟုတ်ဘဲ အမျက်ထွက်ခြင်း' ဟူသောလူမိုက်အင်္ဂါကို သတိရခြင်းကြောင့် ကျွန်တော် စိတ်ချမ်းသာရာ ရပုံကလေးကိုပြောလိုက်ချင်ပါသေးသည်။ ကျွန်တော်တို့ ရှေးဟောင်းမြန်မာစာပေများ တွင် 'မျက်ကြုတ်ကိုးတန်' ဟူသော အမျက်ထွက်သော၊ ရန်ငြိုးဖွဲ့မိတတ်သော အကြောင်းတရားကိုးပါး ကို မကြခဏ ညွှန်းလေ့ရှိကြပါသည်။ ထို 'မျက်ကြုတ်ကိုးတန်' တွင်နောက်ဆုံးအချက်မှာ 'အရာမဟုတ် သည်၌ အမျက်ထွက်ခြင်း' ဟုဆိုပါသည်။
မိုးရွာလိုက်လျှင် 'အရေးထဲမှာ ဒီမိုးကလဲ' ဆိုတာမျိုး၊ လေတိုက်လိုက်လျှင် 'ဟာ . . . ဒီလေကလဲ . . . ငါ့နှယ်' ဆိုတာမျိုးကိုဆိုလိုခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ ခလုတ်တိုက်မိလျှင်လည်း ခလုတ်တိုက်မိရမလားဟု ဆဲရေးပစ်လိုက်တာမျိုးကို အရာမဟုတ်သည်၌ အမျက်ထွက်ခြင်း ဟုဆိုပါသည်။
ဘုရားဟော 'အဂုင်္တ္တရနိကာယ်' တွင် ပါသောတရားဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် မကြာခဏ ကြုံရတတ်သည်ကတော့ အရေးတကြီးသွားချင်လာချင်၍ ဘတ်စ် ကားစောင့်နေစဉ် ဘတ်စ်ကား မလာနိုင်သောကြောင့် ဘာမျှအကြောင်းမဟုတ်ဘဲ စိတ်ထဲက ဘတ်စ် ကားတွေကို ဆဲနေမိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဘတ်စ်ကားလာလို့ တက်စီးပြီးနောက် စပယ်ယာကိုဒေါသဖြစ်ပြီး စိတ်ထဲက ဆဲနေမိခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဤသည်တို့မှာအရာမဟုတ်သည်၌ အမျက်ထွက်ခြင်းဟု ကျွန် တော်ယူပါသည်။ ထိုသို့သော အခိုက်အတံ့များ၌ ဤစကားပုံကို သတိရလိုက်မိလျှင် ကျွန်တော့်အမျက် ငြိမ်းသလိုလို ဖြစ်သွားတတ်ပါသည်။ စာဖတ်သူကိုလည်း ကျွန်တော့်လို သတိရမိစေရန် တင်ပြရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ စာဖတ်သူက ထိုသို့သောဆင်ခြင်မှုမျိုး ရှေးကတည်းက ရပြီးဖြစ်နေလျှင်တော့ ကျွန်တော့် ထက် အသိရင့်နေသူဖြစ်သောကြောင့် ကျွန်တော်က လေးစားရပါတော့မည်။
နောက်တစ်ခုက 'အကျိုးမရှိဘဲ စကားဆိုခြင်း' ဟူသော အဆုံးအမဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်ခပ် ငယ်ငယ်က အလွန်စကားများသော လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ဖူးကြောင်း စာဖတ်သူရိပ်မိနိုင်ပါသည်။ အသက်အရွယ်လေးရလို့ လူလတ်ပိုင်းရောက်လာတော့ စကားပြောသည်ကို ကျွန်တော်သတိထားရ ကောင်းမှန်း သိလာပါသည်။ ထိုစကားပုံကလေးကို တွေ့ခဲ့မိသည်မှာ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ခန့် ရှိပါပြီ။ 'လူမိုက်အင်္ဂါ' ဆိုလိုက်တည်းက ကျွန်တော်အတော်လေး လန့်သွားလိုက်မိသည်မှာ အမှန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်အတော်လေး လန့်သွားလိုက်မိသည်မှာ အမှန်ဖြစ်ပါသည်။
ငယ်ကျင့်ငယ်စွဲ ဗီဇဆိုသည်မှာ ဖျောက်ရတာအလွန်ခက်ခဲပါသည်။ ထိုစကားပုံကို တွေ့လိုက်ပြီးသည့်နောက်မှာလည်း အကျိုးမရှိဘဲ စကားကိုမဆိုမိအောင် ထိန်းပါသည်။ သို့သော် ပါးစပ်ကအလွန်ကို ပြောချင်မိတတ်ပါသည်။ ယနေ့ တိုင်ပဲ ဆိုပါစို့။ သို့သော်မပြောမီ ဒီစကားပုံလေးကို သတိရလိုက်မိလျှင်တော့ ထိန်းလိုက်နိုင်မြဲ ဖြစ်ပါ သည်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 7/12/2015 09:22:00 AM